सगरमाथा लाई भारतको दावि गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? - Supportive Nepal
January 13, 2021 January 13, 2021 News NepalLeaveaComment on सगरमाथा लाई भारतको दावि गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
मंगलबार प्रशारित एक कार्यक्रममा च्यानलका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर यस्तो अभियानको थालनी गरेको बताएका हुन्। उनले सगरमाथाको नाम ‘माउन्ट एभरेष्ट’ नभएर ‘माउन्ट सिकदर’ राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भारतीय राधानाथ सिकदरले सगरमाथाको उचाई पहिलो पटक नापेको दाबी गर्दै यसको नाम पनि उनकै नामबाट राखिनुपर्ने बताएका हुन्। प्रधान सम्पादक चौधरीले नाम मात्र फेर्ने नभएर सगरमाथा माथि भारतले दाबी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘माउन्ट एभरेष्टको नाम राधानाथ सिकदरको नामबाट हुनुपर्छ’, प्रशारित कार्यक्रममा उनले भनेका छन् ‘यसका लागि भारतले अभियान चलाउनुपर्छ, र हामीले विश्वसामु हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ।’ उनी थप्छन्, ‘राधानाथ सिकदर बंगालका प्रख्यात गणितज्ञ थिए ।
उनले माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापे । माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नाप्ने उनी नै पहिलो व्यक्ति थिए । भारतमा त्यसवेला अंग्रेजको शासन थियो, त्यसैले उनीहरूले आफ्नो हिसाबले नाम राखिदिए । एन्ड्रयु वा जो जर्ज एभरेस्टका उत्तराधिकारीको रूपमा सर्भे अफ इन्डियाको प्रमुख थिए ।
ओलीलाई प्रचण्डको चुनौती : पार्टीले काम गर्न नदिएको एउटा प्रमाण दिनुस्
सुशान्त प्रकरणः सिबिआईको अनुसन्धान पूरा, निकाल्यो यस्तो निष्कर्ष,पूरै पढ्नुहोला
कोरोना निको भइसकेपछि पनि लामो समय यस्ता गम्भीर समस्या देखिन्छ: अक्सफोर्ड अनुसन्धान
October 22, 2020 October 22, 2020 News Nepal
दाङमा गुडिरहेको बसमा आगलागी,यस्तो छ अवस्था, हेर्नुहोस्
December 14, 2020 News Nepal